anatin’ny distrikan’i Manakara nentin’ny hamamoana ka nanivaiva ireo mpitandro filaminana manatanteraka sakana ara-pahasalamana amin’ny toerana roa alohan’ny hiditra an’i Manakara. Teo Ambokala sy Marofarihy no nitrangan’izany ny alin’ny 02 jona tamin’ny 8 ora sy sasany. Ompa sy fandrahonana no nataony raha nangatahana am-panajana izy hidina ny fiarany hojerena hafanana. Mbola nopotehiny tamin’ny fiara ihany koa ny fitaovana famantarana fanaovana sakana ara-pahasalamana an'ny faritra. Vao naheno ny tatitra ny lehiben’ny mpitandro filaminana tao an-toerana dia nidina ifotony ka nony tonga teo Marofarihy dia efa toetra-na jiolahim-boto no hita satria dia natsivalany tamin’ny sakan’ny arabe ny fiarany ary nandeha nitsoaka izy. Tany amin’ny trano fisotroan-toaka iray tsy dia lavitra teo no tratra izy ka dia nentina niaraka tamin'ny fiarany hiverina hamonjy ny tobin'ny zandarimaria mba hifehezana azy. Efa naiditra am-ponja vonjimaika moa ny lehilahy.